Darts of Fury Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Fury ၏မြှား
Fury APK ကို၏မြှား
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကကစားခဲ့သည့် #1 လှံလက်နက်ဂိမ်း Play ။ x01, ခရစ်ကက်, ရှန်ဟိုင်းနှင့်ပိုပြီး၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာလှံလက်နက်ပွဲအတွက်အစစ်အမှန်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ရိုးရှင်းသောပွတ်ဆွဲ-to-ပစ်စက်ပြင်, အပြန်အလှန် dartboards နှင့်ပေါက်ကွဲစေတတ်သောအမှတ်ပေးနှင့်အတူသင်ယူဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့်ဦးဆောင်သူထိပ်ဆုံး!
• LEAGUE MODE - 01 ကိုက်ညီ '' ၌သင်တို့၏အဖွဲ့ချုပ်အပေါ်ယူလှံလက်နက်သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးရန်သင့်လမ်းအပေါ်ဆုဝင်ငွေ
• Battle MODE - '' Up ကို Count '' ၏ Real-time ဂိမ်းထဲမှာပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်အာမခံဒင်္ဂါးပြား, 'ခရစ်ကက်' နဲ့ 'ရှန်ဟိုင်း' '
•မိတျဆှ MODE - 301 တစ်ဂိမ်းရန်သင့်မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်ခရစ်ကက်သို့မဟုတ် Up ကို Count နှင့်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးသူတွေ့မြင်
• Custom - 100 ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်၏နှင့်သင်၏လှံလက်နက် customize
•ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် - ကာတွန်း dartboards နှင့်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အရေးယူမှုနှင့်အတူပြည့်စုံကာအံ့မခန်းလှံလက်နက်နယ်ပယ်တွင် play
•သင်တန်း Mode ကိုနာရီက Round တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းပွေးညီဂိမ်း features
•သင် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတိုးတက်မှုကယ်တင်နိုင်အောင် Facebook ကအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုး
• Player ကို stats
သငျသညျ Fury ၏မြှားနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ရုံသင်မြင်ချင်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂါရပ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြချင်လျှင်, သငျသညျ https://support.dartsoffury.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
မှတ်ချက်: Fury ၏မြှားကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ပစ္စည်းများကိုအမှန်တကယ်ငွေနှင့်ဝယ်ရရှိနိုင်ကြသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကို setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။
Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများ။ ကစားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
100.99 ကို MB